Tag: mobile mkpokọta | Martech Zone
Tag: mkpanaaka mkpokọta
Otu esi eme ka ihe ka ukwuu na desktọpụ gị na mbugharị mbugharị
Na Tọzdee, Septemba 11, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Na ngwa ngwa ịmakụ mobile, ọ dị mfe maka azụmaahịa ileghara saịtị desktọọpụ ha anya, mana ọtụtụ mgbanwe ka na-eme site na usoro a, yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya ileghara saịtị desktọọpụ gị anya. Ihe kachasị mma bụ ịnweta saịtị maka ọtụtụ nyiwe; mgbe nke ahụ gasị, ọ bụ mkpebi ikpebi ma ịchọrọ saịtị mkpanaka kwụ ọtọ, saịtị na-anabata ihe nke na-edepụta desktọọpụ desktọọpụ na mkpanaka, ngwa ngwanrọ na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ngwakọ
Wejọ dịkwa anyị? Ee e, ọ bụghị n'ezie. A na m atụ ụjọ na saịtị ndị ejibeghị nke ọma maka ojiji ekwenti na-ata ahụhụ site na mmekọrịta na mmekọrịta nke ndị ọrụ na-adịghị mma. Ugbu a Google na - ejide ngwa ngwa site na imelite algorithms iji kwụọ ụgwọ saịtị ndị kachasị maka onye ọrụ mkpanaka nwere ọkwa dị ukwuu na nyocha ekwentị. Bido na Eprel 21, anyi ga-agbasawanye ojiji nke ekwenti-enyi na enyi dika akara ogo. Mgbanwe a ga-emetụta nyocha ekwentị na niile
57% nke ndị mmadụ anaghị atụ aro gị n'ihi na…
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 24, 2014 Saturday, March 5, 2016 Douglas Karr
57% nke ndị mmadụ anaghị atụ aro ụlọ ọrụ gị n'ihi na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka kachasị mma. Nke ahụ na-ewute… na anyị maara Martech Zone bụ otu n'ime ha! Ọ bụ ezie na anyị nwere ngwa mkpanaka dị egwu, anyị maara Jetpack ọkọlọtọ mobile isiokwu bụ ihe mgbu iji lelee saịtị anyị na. Ka anyị na ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ ma na-enyocha nyocha ha, ọ bịara doo anyị anya na ndị ahịa anyị anaghị eme nke ọma
Wednesday, June 6, 2012 Adam Obere
M na-echebu na ngwa ngwa mkpanaka ga-aga n'ụzọ nke ngwanrọ desktọọpụ mana ọ pụtaghị na ọnụ ọgụgụ nke ngwa ndị ahụ na-ebelata. Dị nnọọ na-abụghị, nyiwe na i nwere ike iru mobile ngwa na-aghọ ndị ọzọ oké ọnụ kwa ụbọchị (anyị wuru anyị iPhone App na Appifier maka $ 500)… na ọtụtụ n'ime ha na-akwado ma mbadamba na mobile gafee ọ bụla na ngwaọrụ ma ọ bụ n'elu ikpo okwu. Mkpebi n'etiti iwulite ekwentị